Sacuudiga oo ka hadley xajka sanadkan' sababo la xiriira cudurka 'coronavirus' – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Sacuudiga oo ka hadley xajka sanadkan’ sababo la xiriira cudurka ‘coronavirus’
Boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa ku dhawaaqday inay qabaneyso “xaddidan” Xajka sanadkaan sababtuna tahay cudurka faafa ee coronavirus, iyadoo dadka horeyba ugu noolaa boqortooyada loo oggol yahay inay ka qeybqaataan xajka oo bilaabanaya dabayaaqada bisha Luulyo.
“Waxaa la go’aamiyay in lagu qabto xajka sanadkan tiro aad u kooban … oo leh dhalashooyin kala duwan oo boqortooyada ku jira,” ayuu yiri Mas’uulka Sucuudiga u hadlay Isniintii, isagoo soo xiganaya wasaaradda Xajka.
Go’aanka ayaa ku soo aadaya iyadoo kororka kiisaska COVID-19 ee adduunka oo dhan, la’aanta tallaal iyo ay adag tahay in la ilaaliyo masaafada jireed ee aaminka ah ee tirada badan ee xujaajta ka imanaya dibedda, ayaa lagu yiri bayaanka.
In kabadan laba milyan oo qof ayaa xajka sanadlaha ah ku taga magaalada barakeysan ee Makka sanad walbo, oo ay ku jiraan qaar badan oo ka socdaa dibada.
Xajka, waa waajib ku ah muslimiinta kartida leh ugu yaraan hal jeer noloshooda, wuxuu matalaa ilaha ugu weyn ee suurtagalka faafinta maaddaama ay malaayiin xujey ah ku xirayaan goobaha diiniga ah ee ciriiri ku ah.
Xajka oo la xadidey waxay u dhigan tahay khasaare weyn oo soo food saaray boqortooyada, taasoo durba ka reebaysa laba-meeloodkii ka dhashay hoos u dhaca fayraska iyo hoos u dhaca sicirka saliidda.
Waxay sidoo kale kicin kartaa in la cusbooneysiiyo baaritaanada ku saabsan meelaynta Boqortooyada Sucuudi Carabiya ee goobaha ugu wanaagsan – boqortooyada oo ah isha ugu xoog badan sharci ahaanshaha siyaasadeed.
Musiibo taxane ah oo sanadihii la soo dhaafey, oo ay kujirto shaambaddii 2015 ee lagu dilay 2,300 oo xujey ah, ayaa dhalisay dhaleeceyn maamulka boqortooyada ee Xajka.
Xaj dhameystiran, oo sanadkii hore qaatay qiyaastii 2.5 milyan oo xujey ah, ayaanay suuragal ahayn ka dib markii maamulku kula taliyay muslimiinta dabayaaqadii Maarso in ay dib u dhigaan diyaar garowga cudurka dartiis.
Horaantii bishaan, dalka Indonesia, oo ah wadanka ugu dadka muslimiinta badan, ayaa u soo ifbaxay mid ka mid ah wadamada ugu horeeya ee ka taga xajka ka dib markii uu ku cadaadiyey Riyadh cadeymo, iyadoo wasiir uu ku tilmaamay “go’aan aad u qadhaadh oo adag”.
Malaysia, Senegal iyo Singapore ayaa raacay wicitaano la mid ah.
Ilaa dabayaaqadii bishii Febraayo, boqortooyadu waxay hakisay xajka Umrah ee Makka sababta oo ah dillaaca cudurka covi19.
Boqortooyada ayaa leh mid ka mid ah heerarka ugu sarreeya ee infakshanka coronavirus ee Bariga Dhexe, iyada oo inka badan 161,000 wadarta la xaqiijiyay aya qabaan xanuunka covi19 iyo 1,307 dhimasho ay jirto.
Previous articleFaahfaahin Qarax ka dhacay xerada Turkisom ee Muqdisho
Next articleTrump ayaa beegsanaya shaqaalaha ajnabiga ah xayiraadda fiisaha cusub